Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #0; Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu) #692
Izimfihlakalo Zezulu #692
692. ISAHLUKO 7
Njengoba umuntu enomqondo ofiphele ngezulu, umqondo ofiphele kangangoba kuyafana nokuthi akanawo nomncane umqondo ngalo, kunjalo nangomqondo wakhe ngesihogo. Malungana nesimo somqondo wabantu ngezulu nesihogo, ufana nowabantu abahlala emaqhugwaneni ehlathini limbe abangaka ze baphumele ngaphandle kwehlathi labo abangaba nesithombe esithile emiqondweni yabo ngomhlaba ongaphandle kwehlathi, kodwa bengayazi imibuso yawo, kungasaphathwa ukwazi uhlobo lukahulumeni wawo, ikakhulu kungasaphathwa ukwazi imiphakathi yawo nempilo yaleyomiphakathi. Ngaphandle kokuba nolwazi lwalezizinto imiqondo yabo ngomhlaba ongaphandle kwehlathi labo kayikwazi ukungabi yimiqondo efiphele kangangokufana nokuthi ka-banawo nomncane umqondo ngawo. Kunjalo nangomqondo womuntu ngezulu nangesihogo. Nokho iqiniso wukuthi ziningi ngokungenakubalwa izinto nezenzeko ezulwini nasesihogweni, futhi ziningi kakhulu kunezinto nezenzeko zakunoma yimuphi umhlaba wemvelo. Ukuthi ziningi ngokungenakubalwa kangakanani kungabonwa ngalokhu, ukuthi, njengoba engekho umuntu onezulu elifana ncamashi nelomunye, kanjalo kakho umuntu onesi-hogo esifana ncamashi nesomunye ; kunga bonwa futhi ngokuthi yonke imiphefumulo eke yaphila emhlabeni wemvelo kusukela ekudalweni kwayo iya ezulwini noma esihogweni ibuthane khona.